Induction Induction Inotengesa Mafuta, Zvishandiso, System, Units
musha / Ultrahigh Frequency Series / Inotakurika Induction Brazing Heater
Category: Ultrahigh Frequency Series Tags: HF inobhururuka inocheka muchina, induction inotakurika brazing muchina, inotakurika kupenya, chinotakurika chekupisa heater, inotakurika inopenya induction heater, inotakurika HF ichipenya heater, inotakurika induction inobhururuka, inotakurika induction brazing heater
Nekukwirira kwepamusoro kusvika ku 11KHz ^ 2.0MHz kuvhara kwemhepo kunogona kudzorwa pasi kudarika 1mm, uye zvikamu zviduku uye zviduku zvingave nyore kupisa.
IGBT uye magadzirirwo emashandisirwo emagetsi zvino ashandiswa; kutendeseka kwakakwirira uye kuderedza mari yekuchengetedza.
100% basa rinoshandiswa, kushandiswa kwekushanda kunobvumidzwa paine simba guru rinobuda.
Zuva rinogadziriswa kana kuti nguva dzose simba rinogona kusarudzwa maererano nekuwana zvakakwirira kupisa kwekugadzirisa;
Kuratidza kwekushisa simba uye kupisa kwemazuva ano uye kusvibisa nguva.
Zviri nyore kuisa, kuiswa kunogona kuitwa nomunhu asingabatsiri nyore nyore;
Chiedza chechiedza, chiduku zvishoma;
Kubatsirwa kwemuenzaniso pamwe ne timer: simba uye nguva yekushanda ye nguva yekudziya uye nguva yekuchengetedza inogona kugadziriswa pamwe chete, kuti ione kushandiswa kwemafuta ekutsvaga, iyo muenzaniso inoshandiswa kushandiswa mukugadzirwa kwematch kuvandudza kudzokorora.
kupisa kushandiswa kwegasi uye shaft.
Kuchenesa tambo duku kudarika 1mm
inotungamirana inoputika nokuda kwechikoro chekutsvaga kana ekoroji nezvimwe zvakadaro.